Culeyska iska rido adiga oo bariiska ku cunaya digaag | Cuntada Nutri
Iska yaree miisaanka adoo cunaya bariiska digaagga
La cunnada bariiska Waa cunto loogu talagalay gaar ahaan dhammaan dadkaas u baahan inay miisaanka ka dhintaan kiiladaas dheeraadka ah ee aadka u dhibaya. Waa nidaam aad u fudud in la fuliyo, waxay ku saleysan tahay qaadashada bariiska oo leh digaag. Haddii aad si adag u sameyso waxay kuu ogolaaneysaa inaad lumiso 2 kiilo 8 maalmood gudahood.
Haddii aad go'aansato inaad fuliso cunnadan waa inaad yeelataa xaalad caafimaad oo caafimaad leh, cab biyo inta ugu badan ee suurogal ah maalin kasta, cun bariis la kariyey iyo digaag la dubay, ku dar dhadhamkaaga macaaneyaha iyo kuleyli cuntadaada cusbo, jiis fudud iyo xaddiga ugu yar ee saliidda saytuunka ah. Waa inaad ku celisaa liiska hoos ku qoran oo faahfaahsan maalin kasta oo aad qorshaynta samaynayso.
1 Liiska maalinlaha ah
2 Maxay cuntada bariiska digaaggu u tahay xulasho wanaagsan?
4 Qadar maalinle ah oo la sameeyo cuntada
5 Ma isticmaali kartaa bariiska buniga ah?
6 Bariis iyo digaag menu
7 Sida loo sameeyo bariis digaag
Quraac: 1 koob oo shaah ah, 1 caano fadhi oo yar, 1 rooti miis fudfudud iyo 1 miraha liinta.
Qado: bariis leh digaag iyo 1 koob oo bolus ah ama shaah cagaaran. Waxaad ku cuni kartaa qadarka bariiska digaaga aad rabto.
Cunto fudud: 1 koob oo bun ah oo caano leh, 2 rootiga qamadiga lagu kariyo iyo 2 miraha liinta.
Casho: 1 koob oo maraq khudradeed ah, 1 baaquli oo bariis digaag ah iyo 1 koob oo ah shaah cad ama casaan ah.
Ka hor intaadan seexan: 1 tufaax ama 1 pear.
Hoos waxaad ka heli doontaa menu 3 maalmood ah oo ku saabsan cuntada bariiska iyo digaagga.
Maxay cuntada bariiska digaaggu u tahay xulasho wanaagsan?
Bariiska cunada digaaggu waa bedel fiican oo lagu sagootiyo kiilo dheeraad ah. Waxay leedahay tallaabo daahirinta, taas oo waxay naga dhigi doontaa inaan dareemo calool xumo. Dhinaca kale, haddii aan doorano bariis bunni ah, waxaan wajaheynaa cunto leh fitamiino iyo sidoo kale macdano. In kasta oo dhinaca kale, digaaggu yahay isha laga helo borotiinka laakiin ka da 'weyn sidoo kale wuxuu leeyahay fiitamiinno kooxda B iyo A.
Sidaa darteed, marka la isku daro bariiska iyo digaagga labadaba waxaan ku biiri doonnaa labada karbohaydraytyada sida borotiinada, fiitamiinnada, iyo macdanta lagama maarmaan. Isku-dhaf wanaagsan oo la tixgeliyo. Laakiin haa, sida caadiga ah waxay ku dhacdaa cuntada noocan oo kale ah, had iyo jeer way fiicantahay in aan lagu dheereyn waqti dheer oo lagu daro khudradda aan caadiga ahayn.
Dhismaha jirka: Shaki la’aan, bariisku waa mid kamid ah cuntooyinka muhiimka u ah cayaaraha. Waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan ee la helo murqaha waana taas sababta ugu badan ee jir-dhiseyaashu ay ugu sharraxan yihiin. Xaqiiq ahaan, waxay leedahay magnesium waana mid ka mid ah macdanaha ugu muhiimsan cayaaraha. Thanks to cuntadan, waad awoodaa dhaqso u buuxi dukaamada glycogen muruqyada.
Muga: Digaagga iyo bariiska labaduba waa isku dhafka ugu fiican hel mug. Thanks to tusmada glycemic ee bariiska, waa lagama maarmaan tababarka ka hor. Bariiska la kariyey wuxuu siin doonaa 3% fiber iyo sidoo kale 7% protein.
Qeexaan: Haddii ay u adeegto si loo helo mug iyo sidoo kale murqo, bariiska cunnada digaagga sidoo kale waa ku habboon yahay qeexitaan. Ku borotiino Iyagu waa mar labaad aasaaska weyn ee cunnada sidan oo kale ah. Laakiin waa run in wejigan ay tahay inaad isku darto cuntada iyo jadwalka wanaagsan ee loogu talagalay in lagu qeexo.
Cunto fudud: Markaan ka hadlayno cuntada jilicsan, waxaan ka qabannaa cunnooyin taxane ah oo si fudud loo dheefshiido. Tan iyo inta badan munaasabadaha, waxaannu cunnaa markaynu haysanno nooc ka mid ah dhibaatada dheef-shiidka. Sidan oo kale, waxaa lagugula talinayaa inaad ku cunto bariis karsan digaag dhowr maalmood ama seddex maalmood, ka dibna si tartiib tartiib ah u soo bandhig cunto badan.
Qadar maalinle ah oo la sameeyo cuntada
Runtu waxay tahay in qadarku had iyo jeer ku kala duwanaan karo cuntada sidan oo kale ah. In ka badan wax kasta maxaa yeelay waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa dhaqdhaqaaqa jireed ee aan hayno. Si had iyo jeer looga fogaado inaan cunno cunno u dhexeyno xilliyada cuntada, waxaan ku dari karnaa wax yar oo bariis ah, maadaama sida aan ognahay ay tahay mid dheregsan. Waxa jira dad leh 40 garaam oo bariis ah iyo 100 garaam oo digaag ah inay yeelan doonaan in ka badan oo ku filan oo ay ku daraan cunto kasta oo weyn. Laakiin sidaan dhahno, waad kordhin kartaa qadarka bariiska waxyar.
Ma isticmaali kartaa bariiska buniga ah?
Runta waxa ay tahay in iyaduna aad loogula taliyo. Tan iyo markii bariis bunni ah waxay taageertaa miisaanka oo yaraada waana isha weyn ee fiber. Laakiin intaas kaliya maahan, laakiin sidoo kale waxay leedahay antioxidants, waxay hodan ku tahay macdanta sidoo kale waxay na siineysaa tamarta lagama maarmaanka u ah inaan awoodno inaan wajahno cunno bariis leh digaag sida tan oo kale ah.
Bariis iyo digaag menu
Quraac: Bariis biyo lagu kariyey oo la kariyey oo leh laba mirood oo cusub
Subax-dhexe: yogurt dabiici ah
Qado: Bariis bunni ah oo leh salad iyo naas digaag la dubay
Cunto fudud: Gelatin
Casho: Maraq bariis ah oo leh khudaar iyo digaag
Quraac: Shaah, rootiga rootiga oo dhan iyo yogurt
Subax-dhexe: Laba miraha liinta
Cuntada: Bariis leh digaag iyo khudradda shiidan
Cunto fudud: yogurt dabiiciga ah
Casho: Maraq qudaar ah iyo bariis digaag
Quraac: Qaxwada kaligeed ama caano aan dufan lahayn, yogurt dabiici ah iyo 30 garaam oo rooti dhan ah
Subax-dhexe: Laba mirood oo daray ah
Qadada: Salad saliid saytuun ah, bariis la kariyey iyo caano lagu lisay oo la jarjarey naaska digaaga
Waad ku celin kartaa maalmahan illaa usbuuca dhammaado. Haddii saacadaha u dhexeysa aad xoogaa gaajoon tahay, waxaa fiican inaad doorato khudaarta ama miraha. Xusuusnow inay tahay inaad biyo badan cabto waxaadna u samayn kartaa faleebo ahaan. Hadaad rabto inaad udgoonto suxuuntaada, dooro dhir udgoon oo udgoon badan.
Sida loo sameeyo bariis digaag
Haddii aad karineyso bariis bunni ah, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad u ogolaato inay ku qoyso dhowr daqiiqo kahor. Markaa waan karineynaa oo koob rooti ah ayaan u dhigeynaa seddex biyo. Dhinaca kale, naaska digaaggu waa hilibka lagu taliyay ee loogu talagalay cuntooyinka noocan ah ee aan rabno inaan miisaanka iska dhuminno. Ku habboon in la raaco labadaba bariis la kariyey iyo mid la dubay, oo aan ku heli doonno dhadhan badan. Waan awoodnaa ku kari xawaash ama dhir udgoon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Iska yaree miisaanka adoo cunaya bariiska digaagga
Ku jawaab corry
Waxaan u maleynayaa inay tahay cunno ku habboon iyo inaad gaajoon weydo ...
kani miyuu la jaan qaadi karaa cudurka macaanka?
Jawaab ku siiya Misifu-fu
Waxay ahayd inaan sameeyo 4 sano ilaa 9 sano jir sababo la xiriira dhibaatooyin caafimaad. Oo waxaa laga dhigay xoqid. Cuntooyinka kaliya ee aan cuni karay waxay ahaayeen ... caanaha yicibta subaxdii, cunto digaag la dubay ama bariis lagu kariyey iyo isla cashada. Marka 5 sano. Laakiin waxaan horey u iri inay sabab u tahay dhibaatooyin caafimaad.
Oo meeday borotiinnadii? Khabiiro nafaqo ahaan ma jecli cunnadan, waad dhimi kartaa miisaanka laakiin waxaan lumin lahaa muruqyada natiijaduna waxay noqon doontaa jidh bilic yar
Waa hagaag ninyahow, adoo tixgelinaya in digaagga uu leeyahay qiyaastii 20g oo borotiin ah 100g oo wax soo saar ah iyo bariis bunni ah oo ku saabsan 8g 100g, 3 raashin oo leh 100g oo keliya oo ah walax kasta oo horeyba kuu siin jirtay 84g borotiin maalintii. Tirinta kuwa caano fadhi iyo caano, waxaan usoconaa in kabadan 100g borotiin ah maalintii. In ka badan in ku filan ... Waa maxay nafaqada xd
Ku jawaab harlequin
Croquettes dhaxalka Iberia
Cunto baradho macaan